Bahaqwe yiCovid kwabhuntsha umdlalo weTest wamaBhokobhoko
July 7, 2021 Impempe.com
Kubhuntshe umdlalo weTest phakathi kweNingizimu Afrika neGeorgia obekumele ube ngoLwesihlanu e-Ellis Park Stadium, ngenxa yeCoronavirus. Ekhempini yamaBhokobhoko bangu-12 abatholakale sebehaqwe yileli gciwane, kanti kwiGeorgia bane.
Lokhu kuphoqile ukuthi ungabe usaba khona umdlalo. Ngeledlule la maqembu adlale umdlalo wokuqala weTest lapho amaBhokobhoko ewine khona ngo 40-9.
Indlela okwenzeka ngayo izinto kubukeka kungase kuphazamiseke umdlalo obhekwe ngabomvu phakathi kweNingizimu Afrika neBritish & Irish Lions, ngoJulayi 24.
Nokho okwamanje lo mdlalo ubukeka uzoqhubeka ngenxa yokuthi baningi abadlali abakhona ekhempini, kanti nesikhathi sisekhona.
Kodwa ukwanda kwezibalo zabanegciwane kungagcina kuwumisile umdlalo ngoba umthetho uthi abatholakala neCoronavirus kumele bahlale izinsuku eziyishumi bebodwana.
Ngaphandle kwalokho kusuke sekudingeka ukuthi abadlali abebenegciwane bagcine umgomo oqinile wokubuyela enkundleni othatha izinsuku eziningi.
Akungabazeki ukuthi ithimba labaqeqeshi lamaBhokobhoko ngeke lithande ukungena enkundleni ngaphandle kwabadlali balo abahamba phambili. Lena ngenye yezinto ezingenza ugcine umisiwe noma uphazamiseka umdlalo.
Esimeni esibhekene namaBhokobhoko uLood de Jager utholakale enegciwane ngoMsombuluko. UMarvin Orie, Frans Steyn, Handre Pollard noFrans Malherbe, kuvele ngoLwesibili ebusuku ukuthi baneleli gciwane.
Uma kukhulunywa ngokuhlala ngawedwana izinsuku eziyishumi, lokhu kuchaza ukuthi laba badlali kumele bagoye kuze kube umhlaka 16. Nokho abadlali abakhokhelwayo kumele balandele eminye imithetho eqinile emayelana nokubuyela ekudlaleni, ngaphambi kokuthi bavunyelwe enkundleni.
Le migomo ingase ithathe izinsuku ezingu-17. Ngesinye isikhathi imigomo yokubuyela enkundleni ithatha isikhathi eside uma kuvela ezinye izinkinga emzimbeni womdlali, njengesimo esingesihle senhliziyo esitholakale kumdlali weBulls uWaly Steenkamp, okuyinto emenze wangadlala izinyanga.
FUNDA NALA: Usevumbuke kwiChippa uHunt oxoshwe yiChiefs
Ngakho akukona ukugagamela noma ukuba nehaba ukuthi akwaziwa bazobuyela nini ekudlaleni abadlali abatholakale benegciwane. Okunye okumele kuqapheleke ukuthi kuyenzeka abadlali batholakale bemsulwa kuthi sekusondele umdlalo batholakale benalo igciwane. Lokhu kuliphindisela emuva lonke iqembu.
Uma amaBhokobhoko ephoqeleka ukuthi aye emdlalweni wawo ngaphandle kukaSteyn, Pollard noMalherbe, kuzowalimaza kakhulu lokho. Noma kungathiwa bayavunyela ukudlala ngemuva kokugonqa izinsuku eziyishumi kodwa laba badlali bazobe sebephuthelwe ukuziqeqesha neqembu izinsuku eziyishumi. Lokhu akukuhle neze eqenjini elisadlale umdlalo owodwa kuphela kusukela ngoNovemba 2019, ngesikhathi bewina iNdebe yoMhlaba.
Ezakamuva, Ibhola lombhoxo
Previous Previous post: Uyibona iyinseleli enhle iBritish & Irish Lions u-Everitt weSharks
Next Next post: UMpengesi uthi uHunt uzonikwa amandla ayenawo kwiWits